महिलाले जन्म दिइन ‘प्लास्टिक बेबी’जसको छाला प्लास्टिक जस्तै छ । – Namaste Dainik
महिलाले जन्म दिइन ‘प्लास्टिक बेबी’जसको छाला प्लास्टिक जस्तै छ ।
July 21, 2020 July 21, 2020 NamastedainikLeaveaComment on महिलाले जन्म दिइन ‘प्लास्टिक बेबी’जसको छाला प्लास्टिक जस्तै छ ।
एजेन्सी । पंजाबको एक शहरमा एक बच्चीले जन्म लिएकी छिन् । उनको शरीर प्लास्टिक जस्तो देखिन्छ । विचित्र शरीर भएकी यी बच्चीको उपचारको लागी अस्पताल लगिएको थियो । बच्चीलाई देखेर डाक्टर पनि अचम्मित भएका थिए । यी बच्चीलाई विचित्रको रोग लागेको डाक्टरहरुले बताएका छन् ।
प्लास्टिक जस्तो शरीर भएकी बच्ची मानिसहरुको आर्कषणको केन्द्र भएकी छिन् । कसैले यी बच्चीलाई छोएमा रुने गर्छिन । माछाको जस्तो मुहार भएकी बच्चीको मुख प्लास्टिकको जीतो चमकी रहेको देखिन्छ । यी बच्चीले दुध पिउन सक्दिनन् । अन्य पनि खाँदिनन् । यी प्लास्टिक बेबीको उपचार गराइरहेका डाक्टरहरुले कोलोडिओन बेबी भनेका छन् ।
यी बच्चीको छालालाई शरीरबाट प्रत्येक तीन–चार हप्तामा निकाल्ने गरिएको छ । यसक्रममा शरीरको छाला फाट्ने हुनाले उनलाई दुख्ने गर्छ । डाक्टरहरुले यस्तो कोलोडिओन भएका बिरामीहरु थोरै मात्र उपचारमा आएको बताएका थिए । उनको अनुसार ६ लाख नवजात शिशुमा कोही एकलाई हुने गरेको पाइएको छ ।
अनिच्छित ग`र्भ रहेमा के गर्ने ! औषधिबाट गरिने गर्भ`प`तन कति सुरक्षित ?
कोरोना संक्रमित गर्भवतीकाे सर्जरी गर्न पनि तयार छु:डा.जीवन धमला।